Uvuka ngohlelo oluzosiza abefundisi abafuna omaqondana
UBASETSANA Kumalo uthi akangabazi ukuthi iPastor Wants a Wife, izoba ngezinye zezinhlelo ezizokwenza abaningi baxoxe kabanzi kanti izoqala ukukhonjiswa namhlanje kuMzansi Magic ISITHOMBE: TWITTER
Nokubongwa Phenyane | April 8, 2021
UBASETSANA Kumalo wenkampani eqopha izinhlelo ezihlukene zethelevishini iConnect tv, uveze ukuthi uhlelo olusha oluthi Pastor Wants A Wife, luzotshengisa ukuthi kunzima nakubefundisi kwesinye isikhathi ukuthola amakhosikazi.
Lolu hlelo luqale ngoMgqibelo odlule ngo-8 ebusuku ku-1Magic kanti kulindeleke ukuthi luqale namhlanje kuMzansi Magic ngo-8.00 ebusuku.
Kuzobonakala u-Apostle Aaron Zioan Khunou noPastor Lincoln Fero, befuna amakhosikazi abazowashada. Kuneziqephu eziwu-13 ezizoveza abesifazane abayisithupha bezama ukuthatha amehlo alaba befundisi. Ngeke kugcine ngabo kodwa kuzohlanganisa imindeni nabangani babo.
“Uhlelo luzoveza ukuthi ibandla kanye nemindeni kungena kangakanani ekusizeni umfundisi noma umholi walo ekutholeni umaqondana. Ngeke kugcine ngokuthi kubonakale abefundisi nalaba besifazane kuphela, kodwa baningi abazongenelela basize ekukhetheni intokazi eyiyona yona. Ngeke bagcine ngokukhethana uma konke kuhambe kahle, siyohamba nabo baze babophe ifindo lo mshado,” kuchaza uBasetsana.
Uhlelo iPastor wants a Wife luzoveza ukuthi nabafundisi bayaludinga ukusizo ukuze bathole amakhosikazi, abagcini nje ngokuthandaza
Uthe ibandla nomndeni womfundisi bayoqala bahlangane nabesifazane bambuze imibuzo embalwa uma kucaca ukuthi akakulungele okufuna oyedwa kulaba befundisi, yilapho beyobe sebevumelana ngokuthi akhishwe lowo wesifazane ohlelweni.
“Abesifazane okubahambela kahle bayogcina beya ngisho enkonzweni eholwa yilaba befundisi, bayophinde babe nesikhathi bobabili baye eholidini bazijabulise ukuze bazane kangcono. Okumele bakwazi ababukeli ukuthi kulaba besifazane abayisithupha, uyedwa ozobe ephuma ohlelweni isonto ngalinye kuze kusale ababili abayokhethwa yilezi zinceku. Sikholwa ukuthi ngalolu hlelo sixoxa indaba yothando futhi sithemba ukuthi abantu bakuleli bazolujabulela. Siyazi futhi abantu bazozithanda lezi zintokazi isiqephu ngasinye uma bezibona,” kuchaza uBasetsana.
UKumalo nozakwabo sebekhiqize izinhlelo ezithandwayo kuleli okubalwa i-Our Perfect Wedding neDate My Family.
UNomsa Philiso wakwaM-Net, uthe abangabazi ukuthi uhlelo lungolunye oluzodonsa amehlo ababukeli futhi luzobenza bakhulume ngalo.